ကမ်ဘာ့ဆံပငျအရှညျဆုံး အမြိုးသမီးတှရေဲ့ရှာ - Thutazone
ရေးသားသူ – ခြော(အစိမျးရောငျလှငျပွငျ)
ဂငျးနဈစံခြိနျဝငျ ကမ်ဘာပျေါက ဆံပငျအရှညျဆုံး အမြိုးသမီးတှေ နထေိုငျတဲ့ရှာဟာ တရုတျနိုငျငံ ဟှမျလုံရှာဖွဈပါတယျ။ ရှာရဲ့ ပတျပတျလညျဟာလညျး တောငျတနျးတှေ ဝိုငျးရံနပွေီး သာယာလှပတဲ့ သဘာဝပတျဝနျးကငျြ တောငျတှကေို ထှငျးပွီး စိုကျပြိုးထားတဲ့ လှကေားထဈ စိုကျခငျးတှရေဲ့ အလှဟာ ရှုလို့မဆုံးအောငျ သာယာလှပပွီးတော့ အဲဒီ ဟှမျလုံရှာ ကလေးဟာလညျး ထူးဆနျးတဲ့ ဓလထေုံ့းစံတှေ ရှိတာကွောငျ့ စိတျဝငျစားဖို့ ကောငျးလှပါတယျ။ အဲဒီရှာမှာနထေိုငျကွတဲ့ လူမြိုးစုကို ယောငျ လူမြိုးစုလို့ချေါကွပွီး အနီရောငျယောငျ လူမြိုးစုဆိုရငျ ပိုပွီးလူသိမြားပါတယျ။ ဘာကွောငျ့ဆိုရငျ သူတို့ဟာ အဝတျအစား အနီရောငျကိုသာ ဝတျဆငျကွတာမို့ပါ။
ပွီးတော့လညျး ရှညျလြား မညျးနကျပွီး သနျမာလှတဲ့ ဆံပငျတှကွေောငျ့လညျး နာမညျကြျောပါသေးတယျ။ အဲဒီရှာမှာ အိမျခွေ ၇၀ခနျ့သာ ရှိတဲ့ လူနညျးစု ယောငျ တိုငျးရငျးသားတှေ နထေိုငျတဲ့ရှာပမေဲ့ အိမျတိုငျးမှာရှိတဲ့ အမြိုးသမီးတိုငျးဟာ ရှညျလြားလှတဲ့ ဆံပငျတှကေို ပိုငျဆိုငျထားကွပါတယျ။ သူတို့ ကိုယျတိုငျကလညျး ဆံပငျရှညျဟာ သူတို့ဘဝရဲ့ အစိတျအပိုငျးလညျး ဖွဈတယျဆိုပွီး မွတျနိုး တနျဖိုးထားကွတယျလို့ ဆိုကွပါတယျ။ အမြိုးသမီးတိုငျးဟာ ဆံပငျရှညျရှညျတှဖွေဈပွီး အရှညျဆုံး ဆံပငျဟာ ၂မီတာ( ၆ပခှေဲ) လောကျကို ရှိပွီး ဆံပငျတှကေို ဖွနျ့ခလြိုကျရငျ မွပွေငျနဲ့ ထိနအေောငျကို ရှညျလြားသနျစှမျးကွပါတယျ လို့ သိရပါတယျ။
ဟှမျလုံရှာက ယောငျအမြိုးသမီးတှရေဲ့ဘဝမှာ ဆံပငျရှညျဟာ အလှနျအရေးပါတဲ့ဘဝရဲ့ အစိတျအပိုငျးအဖွဈ ခံယူကွတာကို တှရေ့မှာပါ။ သူတို့ဟာ တဈသကျမှာ တဈကွိမျသာ ဆံပငျဖွတျခှငျ့ရှိကွပွီး အဲဒီအခြိနျဟာလညျး သူတို့အသကျ ၁၆နှဈကနေ ၁၈နှဈကွား အိမျထောငျပွုခါနီးအခြိနျ ဖွဈပါတယျ။ ဖွတျလိုကျတဲ့ ဆံစုတှကေိုတော့ သူတို့ရဲ့ မိခငျကို ပေးအပျပါတယျ. မိခငျတှကေ အဲဒီဆံပငျစုတှနေဲ့ ဆံထုံးတုတှေ ဆံပငျအလှဆငျ ဆံထုံးတှေ လုပျကွပွီး အမြိုးသမီးတှရေဲ့ ဆံပငျတှကေို ထုံးဖှဲ့ရာမှာ ထိုဆံထုံးတုလေးတှေ ထညျ့သှငျးပွီး ထုံးနှောငျကွပါတယျ။
တဈခြို့တှကေတော့ မူလဆံပငျရှညျတှနေဲ့သာ ထုံးကွပွီး အခြို့ကတော့ ဆံပငျတုတှနေဲ့ ရောပွီး ထုံးဖှဲ့ကွပါတယျ။ ဟှမျလုံရှာမှာ အမြိုးသမီးပေါငျး ၁၀၀ကြျောခနျ့ရှိပွီး သူတို့အားလုံးဟာ ရှညျလြားတဲ့ဆံပငျရှညျတှေ ရှိပမေဲ့ နခေ့ငျးအလုပျလုပျခြိနျတှမှောတော့ ဆံပငျတှကေို ခေါငျးပျေါမှာ ထုံးထားလရှေိ့ပါတယျ။ အဲဒီလို ထုံးရာမှာလညျး အမြိုးသမီးတှရေဲ့ အိမျထောငျရေး အခွအေနအေလိုကျ ဆံပငျကို ထုံးဖှဲ့ပုံ ကှဲပွားကွပါတယျ။
အိမျထောငျမရှိသူ အပြိုလေးမြားရဲ့ ဆံထုံး
အိမျထောငျမရှိသေးတဲ့ ငယျရှယျသူ အမြုိးသမီးတှကေတော့ ခေါငျးပျေါမှာ ထုံးထားတဲ့ ဆံပငျကို အခွားသူတှေ မမွငျနိုငျဖို့ အပွာရောငျ ပုဝါလို အစ တဈခုခုနဲ့ ဖုံးအုပျထားတတျကွပွီး သူ့နဲ့ လကျထပျတဲ့သတို့သားဟာလညျး မင်ျဂလာဆောငျတဲ့နမှေ့သာ ဆံပငျရှညျကို ပထမဦးဆုံး မွငျတှခှေ့ငျ့ ရတယျလို့ဆိုပါတယျ။ တကယျလို့မြား တဈစိမျးယောကျကျြားလေး တဈယောကျယောကျဟာ လကျမထပျရသေးတဲ့ မိနျးမပြိုလေးရဲ့ ဆံပငျကို တဈစုံတဈခုသော အကွောငျးကွောငျ့ ပုဝါစနဲ့ ဖုံးထားခငျမှာ မွငျတှလေို့ကျပွီဆိုရငျ အဲဒီ အမြိုးသမီးလေးရဲ့ မိဘတှအေိမျမှာ သားမကျအဖွဈနဲ့ ၃နှဈလောကျ နထေိုငျကွရတယျလို့ ထူးထူးဆနျးဆနျး ဓလထေုံ့းစကို တှရေ့ပါတယျ။
အိမျထောငျရှိသူတှကေတော့ ဆံပငျရှညျတှကေို လငျပနျးတဈခပျြလို ခေါငျးပျေါမှာ ခပျပွားပွား အနအေထားနဲ့ ထုံးဖှဲ့ထားလရှေိ့ပါတယျ။
သားသမီးရှိပွီးသား အမြိုးသမီးတှေ ကတော့ ဆံထုံးရှမှေ့ာ ပေါငျမုနျ့လုံးလေးလို အလုံးလေး ဖွဈနအေောငျ ထုံးဖှဲ့လရှေိ့ကွပါတယျ။
နှနေဲ့ ဆောငျးရာသီတှမှော ယောငျမြိုးနှယျ အမြိုးသမီးတှဟော သူတို့ရဲ့ နကျမှောငျရှညျလြားတဲ့ ဆံပငျတှကေို ဂငျြးဂနျြးမွဈထဲမှာ လြှျောကွ ဆေးကွပါတော့တယျ။ သူတို့ရဲ့ ဆံပငျတှကေို လြှျောကွရာမှာတော့ ခတျေပျေါ ခေါငျးလြှျောရညျတှနေဲ့ ခေါငျးလြှျောကွ တာမြိုး မဟုတျပါဘူး။ သူတို့အတှကျ အကောငျးဆုံး ခေါငျးလြှျောရညျကတော့ ဆနျဆေးရညျကို ရကျအနညျးငယျထားပွီး အခဉျြဖောကျကာ အခွားသော ဆေးဘကျဝငျ ပစ်စညျးနဲ့ ပေါငျးစပျထားတဲ့ သဘာဝ ခေါငျးလြှျောရညျသာဖွဈပါတယျ။
ကြှနျမတို့ ငယျငယျတုနျးကလညျး ဆနျဆေးရညျနဲ့ ခေါငျးလြှျောရငျ ဆံပငျတှေ နကျမှောငျ သနျစှမျးတယျလို့ ကွားခဲ့ဖူးတာဟာ ယောငျအမြိုးသမီးတှေ လကျတှေ့ သုံးတဲ့နညျးမှနျး ခုမှသာ သိခှငျ့ရပါတော့တယျ။ သူတို့ကလညျး သူတို့ဆံပငျတှေ ရှညျလြားမညျးနကျ လှပသနျစှမျးရတဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြဟာလညျး ၂ရကျ သို့မဟုတျ ၃ရကျတဈကွိမျ ဆနျဆေးရညျနဲ့ ခေါငျးလြှျောတာကွောငျ့လို့ ဆိုကွပါတယျ။
အစောပိုငျးနှဈတှကေတော့ ရှာရဲ့ ဓလထေုံ့းစံအရ အိမျထောငျရှိ အမြိုးသမီးတှရေဲ့ လငျယောကျြားနဲ့ သားသမီးတှကေလှဲလို့ သူတို့ရဲ့ ဆံပငျရှညျတှကေို အပွငျလူတှေ မမွငျမတှရေ့အောငျ ထိမျးသိမျးထား ခဲ့ရတာကွောငျ့ အခွားသော ပွငျပ တဈစိမျးသူတှေ ဘယျသူကမှ အဲဒီအမြိုးသမီးတှရေဲ့ လှတျလှတျလပျလပျ ဖွနျ့ခထြားတဲ့ ဆံကသောအလှကို မမွငျတှခေဲ့ကွဖူးပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ ခုခတျေမှာတော့ ဓလထေုံ့းစံတှေ အနညျးငယျ လြော့ခလြိုကျပွီဖွဈလို့ ဆံပငျတှေ ဖွနျ့ခထြားတာကို တဈခွားလူတှကေလညျး မွငျတှခှေ့ငျ့ ရလာတာနဲ့အတူ ဆံပငျရှညျရှညျနဲ့ အမြိုးသမီးတှရေဲ့ အလှကလညျး ပိုပွီး နာမညျကြျောလာခဲ့ပါတယျ။
ကြျောကွား လာတဲ့ဆံပငျရှညျနဲ့အတူ အမြိုးသမီးတှဟော တဈခွားသူတှရှေမှေ့ာ ဂုဏျယူစှာ ဓာတျပုံအရိုကျခံ တတျလာကွပါပွီ။ ဟှမျလုံရှာသူတို့ သီခငျြးဆိုပွီး ကခုနျကွတဲ့အခါ လှပရှညျလြားတဲ့ ဆံပငျရှညျတှဟော လပေျေါမှာဝဝေဲ့နပွေီး ပြံသနျးနသေတဲ့သို့ ရှိပါတယျ။ ဆံပငျရဲ့အလှကကျြသရေ နာမညျ ကြျောတာကွောငျ့ ကမ်ဘာလှညျ့ခရီးသညျတှဟော အဲဒီရှာတှကေို မကွာခဏ သှားရောကျလေ့ ရှိပါတယျ။ သူတို့ နထေိုငျတဲ့ ရှာကိုလညျး ဆံပငျအရှညျဆုံး အမြိုးသမီးတှရေဲ့ရှာလို့ ထူတိုငျးက အသိအမှတျပွု ချေါဆိုလာကွပါတယျ။
ယောငျ မြိုးနှယျစု အမြိုးသမီးတှဟော ဆံပငျရှညျကို တမွတျတနိုး တနျဖိုးထားရခွငျး အကွောငျးထဲမှာ ဆံပငျရှညျဟာ သူတို့လူမြိုးတှအေတှကျ အသကျရှညျခွငျး၊ ကနျြးမာခွငျး၊ ခမျြးသာခွငျးနဲ့ ကံကောငျးခွငျးတှကေို ယူဆောငျပေးနိုငျတယျလို့ ယုံကွညျကွ တာကွောငျ့လညျး ဖွဈပါတယျ။ ဆံပငျရှညျလာလေ ကံကောငျးလာလလေို့ ယုံကွညျကွ ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး မိနျးမတို့ဘုနျး ဆံထုံးဆိုတာ ဟှမျလုံရှာသူတှေ အတှကျတော့ လကျကိုငျထားစရာ စကား ဖွဈနမှော အသအေခြာပါဘဲရှငျ။
—— —– ——-
ရေးသားသူ – ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)
ဂင်းနစ်စံချိန်ဝင် ကမ္ဘာပေါ်က ဆံပင်အရှည်ဆုံး အမျိုးသမီးတွေ နေထိုင်တဲ့ရွာဟာ တရုတ်နိုင်ငံ ဟွမ်လုံရွာဖြစ်ပါတယ်။ ရွာရဲ့ ပတ်ပတ်လည်ဟာလည်း တောင်တန်းတွေ ဝိုင်းရံနေပြီး သာယာလှပတဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် တောင်တွေကို ထွင်းပြီး စိုက်ပျိုးထားတဲ့ လှေကားထစ် စိုက်ခင်းတွေရဲ့ အလှဟာ ရှုလို့မဆုံးအောင် သာယာလှပပြီးတော့ အဲဒီ ဟွမ်လုံရွာ ကလေးဟာလည်း ထူးဆန်းတဲ့ ဓလေ့ထုံးစံတွေ ရှိတာကြောင့် စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းလှပါတယ်။ အဲဒီရွာမှာနေထိုင်ကြတဲ့ လူမျိုးစုကို ယောင် လူမျိုးစုလို့ခေါ်ကြပြီး အနီရောင်ယောင် လူမျိုးစုဆိုရင် ပိုပြီးလူသိများပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဆိုရင် သူတို့ဟာ အဝတ်အစား အနီရောင်ကိုသာ ဝတ်ဆင်ကြတာမို့ပါ။
ပြီးတော့လည်း ရှည်လျား မည်းနက်ပြီး သန်မာလှတဲ့ ဆံပင်တွေကြောင့်လည်း နာမည်ကျော်ပါသေးတယ်။ အဲဒီရွာမှာ အိမ်ခြေ ၇၀ခန့်သာ ရှိတဲ့ လူနည်းစု ယောင် တိုင်းရင်းသားတွေ နေထိုင်တဲ့ရွာပေမဲ့ အိမ်တိုင်းမှာရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတိုင်းဟာ ရှည်လျားလှတဲ့ ဆံပင်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြပါတယ်။ သူတို့ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဆံပင်ရှည်ဟာ သူတို့ဘဝရဲ့ အစိတ်အပိုင်းလည်း ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး မြတ်နိုး တန်ဖိုးထားကြတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ အမျိုးသမီးတိုင်းဟာ ဆံပင်ရှည်ရှည်တွေဖြစ်ပြီး အရှည်ဆုံး ဆံပင်ဟာ ၂မီတာ( ၆ပေခွဲ) လောက်ကို ရှိပြီး ဆံပင်တွေကို ဖြန့်ချလိုက်ရင် မြေပြင်နဲ့ ထိနေအောင်ကို ရှည်လျားသန်စွမ်းကြပါတယ် လို့ သိရပါတယ်။
ဟွမ်လုံရွာက ယောင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝမှာ ဆံပင်ရှည်ဟာ အလွန်အရေးပါတဲ့ဘဝရဲ့ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ခံယူကြတာကို တွေ့ရမှာပါ။ သူတို့ဟာ တစ်သက်မှာ တစ်ကြိမ်သာ ဆံပင်ဖြတ်ခွင့်ရှိကြပြီး အဲဒီအချိန်ဟာလည်း သူတို့အသက် ၁၆နှစ်ကနေ ၁၈နှစ်ကြား အိမ်ထောင်ပြုခါနီးအချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြတ်လိုက်တဲ့ ဆံစုတွေကိုတော့ သူတို့ရဲ့ မိခင်ကို ပေးအပ်ပါတယ်. မိခင်တွေက အဲဒီဆံပင်စုတွေနဲ့ ဆံထုံးတုတွေ ဆံပင်အလှဆင် ဆံထုံးတွေ လုပ်ကြပြီး အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဆံပင်တွေကို ထုံးဖွဲ့ရာမှာ ထိုဆံထုံးတုလေးတွေ ထည့်သွင်းပြီး ထုံးနှောင်ကြပါတယ်။
တစ်ချို့တွေကတော့ မူလဆံပင်ရှည်တွေနဲ့သာ ထုံးကြပြီး အချို့ကတော့ ဆံပင်တုတွေနဲ့ ရောပြီး ထုံးဖွဲ့ကြပါတယ်။ ဟွမ်လုံရွာမှာ အမျိုးသမီးပေါင်း ၁၀၀ကျော်ခန့်ရှိပြီး သူတို့အားလုံးဟာ ရှည်လျားတဲ့ဆံပင်ရှည်တွေ ရှိပေမဲ့ နေ့ခင်းအလုပ်လုပ်ချိန်တွေမှာတော့ ဆံပင်တွေကို ခေါင်းပေါ်မှာ ထုံးထားလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီလို ထုံးရာမှာလည်း အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး အခြေအနေအလိုက် ဆံပင်ကို ထုံးဖွဲ့ပုံ ကွဲပြားကြပါတယ်။
အိမ်ထောင်ရှိသူတွေကတော့ ဆံပင်ရှည်တွေကို လင်ပန်းတစ်ချပ်လို ခေါင်းပေါ်မှာ ခပ်ပြားပြား အနေအထားနဲ့ ထုံးဖွဲ့ထားလေ့ရှိပါတယ်။ သားသမီးရှိပြီးသား အမျိုးသမီးတွေ ကတော့ ဆံထုံးရှေ့မှာ ပေါင်မုန့်လုံးလေးလို အလုံးလေး ဖြစ်နေအောင် ထုံးဖွဲ့လေ့ရှိကြပါတယ်။နွေနဲ့ ဆောင်းရာသီတွေမှာ ယောင်မျိုးနွယ် အမျိုးသမီးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ နက်မှောင်ရှည်လျားတဲ့ ဆံပင်တွေကို ဂျင်းဂျန်းမြစ်ထဲမှာ လျှော်ကြ ဆေးကြပါတော့တယ်။ သူတို့ရဲ့ ဆံပင်တွေကို လျှော်ကြရာမှာတော့ ခေတ်ပေါ် ခေါင်းလျှော်ရည်တွေနဲ့ ခေါင်းလျှော်ကြ တာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့အတွက် အကောင်းဆုံး ခေါင်းလျှော်ရည်ကတော့ ဆန်ဆေးရည်ကို ရက်အနည်းငယ်ထားပြီး အချဉ်ဖောက်ကာ အခြားသော ဆေးဘက်ဝင် ပစ္စည်းနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ သဘာဝ ခေါင်းလျှော်ရည်သာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ်တုန်းကလည်း ဆန်ဆေးရည်နဲ့ ခေါင်းလျှော်ရင် ဆံပင်တွေ နက်မှောင် သန်စွမ်းတယ်လို့ ကြားခဲ့ဖူးတာဟာ ယောင်အမျိုးသမီးတွေ လက်တွေ့ သုံးတဲ့နည်းမှန်း ခုမှသာ သိခွင့်ရပါတော့တယ်။ သူတို့ကလည်း သူတို့ဆံပင်တွေ ရှည်လျားမည်းနက် လှပသန်စွမ်းရတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ဟာလည်း ၂ရက် သို့မဟုတ် ၃ရက်တစ်ကြိမ် ဆန်ဆေးရည်နဲ့ ခေါင်းလျှော်တာကြောင့်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
အစောပိုင်းနှစ်တွေကတော့ ရွာရဲ့ ဓလေ့ထုံးစံအရ အိမ်ထောင်ရှိ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ လင်ယောက်ျားနဲ့ သားသမီးတွေကလွဲလို့ သူတို့ရဲ့ ဆံပင်ရှည်တွေကို အပြင်လူတွေ မမြင်မတွေ့ရအောင် ထိမ်းသိမ်းထား ခဲ့ရတာကြောင့် အခြားသော ပြင်ပ တစ်စိမ်းသူတွေ ဘယ်သူကမှ အဲဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖြန့်ချထားတဲ့ ဆံကေသာအလှကို မမြင်တွေ့ခဲ့ကြဖူးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ခုခေတ်မှာတော့ ဓလေ့ထုံးစံတွေ အနည်းငယ် လျော့ချလိုက်ပြီဖြစ်လို့ ဆံပင်တွေ ဖြန့်ချထားတာကို တစ်ခြားလူတွေကလည်း မြင်တွေ့ခွင့် ရလာတာနဲ့အတူ ဆံပင်ရှည်ရှည်နဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အလှကလည်း ပိုပြီး နာမည်ကျော်လာခဲ့ပါတယ်။
ကျော်ကြား လာတဲ့ဆံပင်ရှည်နဲ့အတူ အမျိုးသမီးတွေဟာ တစ်ခြားသူတွေရှေ့မှာ ဂုဏ်ယူစွာ ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံ တတ်လာကြပါပြီ။ ဟွမ်လုံရွာသူတို့ သီချင်းဆိုပြီး ကခုန်ကြတဲ့အခါ လှပရှည်လျားတဲ့ ဆံပင်ရှည်တွေဟာ လေပေါ်မှာဝေ့ဝဲနေပြီး ပျံသန်းနေသတဲ့သို့ ရှိပါတယ်။ ဆံပင်ရဲ့အလှကျက်သရေ နာမည် ကျော်တာကြောင့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေဟာ အဲဒီရွာတွေကို မကြာခဏ သွားရောက်လေ့ ရှိပါတယ်။ သူတို့ နေထိုင်တဲ့ ရွာကိုလည်း ဆံပင်အရှည်ဆုံး အမျိုးသမီးတွေရဲ့ရွာလို့ ထူတိုင်းက အသိအမှတ်ပြု ခေါ်ဆိုလာကြပါတယ်။